Attenuator LC / UPC / SIMPLEX, China Attenuator LC / UPC / SIMPLEX Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji co., Ltd
Fiber optic attenuator, inowanzozivikanwa se flanges uye attenuator, ndeye fiber optic yekubatanidza icentering kubatana. SC fiber optic attenuator anoshandiswa kumisikidza pakati peSC-mhando fiber optic zvinongedzo.
Product Name SM OPTICAL CHIKAMU LC / UPC 5dB 10dB BHUU SINGLE MODE attenuator
Modle Nhamba LC attenuator
Kushanda Wavelength 1310/1550 ± 10
Kushivirira kwe1 ~ 5 dB Kuwanwa ± 0.5
Kushivirira kwe6 ~ 30 dB Kuwanwa ± 10
mukurumari > 1000 nguva
Kushanda Temp -40 ~ 70 ° C
kunyoresa FTTx, LAN, CATV, Telecom, Bvunzo muchina
kutaura kuti ichokwadi RoHS, SGS
ChiPolish Rudzi UPC; APC
ruvara Bhuruu / Girini
moyo Simplex / Duplex
Flange ine flange / nenzeve
Fomu yekutengesa Kusarerekera / OEM / ODM
shandisa Fiber kubatana
Muenzaniso Wevatungamiriri Nguva mukati memazuva manomwe mushure mekusimbiswa
attenuator PCS / bhokisi PCS / katoni （saizi-mm / pcs） 毛重
LC Simplex 50 570 * 430 * 460 mazana4000 40
LC Duplex 50 570 * 430 * 460 mazana10000 40
1) Iyo yepamusoro yekugedza kurongeka inovimbisa iyo centering yeiyo fiber, uye zirconia sleeve ine yakanyanya tembiricha kuramba, acid-base uye yakakwira kuomarara ine yakanaka opisheni kuita uye yakakwira michina kugadzikana.
2) Inogona kudzvinyirira ruzha rwepasi chiuno, kubvisa kuvhiringidzika kwepasi, uye nemagetsi kupatsanura iyo chiratidzo chiratidzo kubva kune huru yekudzivirira terminal, kudzivirira kukuvara netsaona kune huru yekudzivirira system.
3) Kuchinjika, kudzokorodza, kugadzikana kwepamusoro, kurasikirwa kwekuisa kwakadzika, kurasikirwa kukuru kwekudzoka, uye kanopfuura ka1000 nguva dzekudzokororwa uye kubviswa.
4) Certification yemhando yepamusoro: ISO9001: 2015, ROHS
1) Fibre Optical shanduko chirongwa
5) Mamwe masisitimu anoonekera